China Spider LED Kura mwenje SPR-500W Kugadzira uye Fekitori | Fullux
Fullux yakavambwa muna2014 ikambani inotungamira inogadzira mwenje yeLed, yakagadzira akati wandei emwenje emagetsi ekukura kubvira 2017 yezvirimwa zvakasiyana senge cucumber, madomasi, cannabis nezvimwe, zvinoshanda kunzvimbo dzakasiyana sedzematende, midziyo, mapurazi, kuwana kuzivikanwa kubva kuvashandisi. .
Isu takagadzirisa mwenje yedu yemwenje kugadzirisa kukura kwezvirimwa uye kuwedzera goho tichidya simba shoma uye tichideredza mashandiro ekushandisa tichienzanisa neyechinyakare HID, mwenje weHPS. Yakakwirira Mwenje Kusimba, Zvirinani Kufukidza, Zvimwe zvemberi maficha.
SPR -6P Led inokura Chiedza inonyanya kudhura Spider yakatungamira kukura mwenje inofananidzwa kune zvakafanana zvinhu mumusika, dhizaini yevarimi vehunyanzvi vakasanganisa iyo chaiyo yekukura maitiro uye yekugadzira mutengo, inokwezva mashandiro nemutengo unonzwisisika.
1. IP65 Isina mvura, hapana mafeni, hapana ruzha: shandisa superconducting Aluminium se heatsink inopa zvakakwana kupisa kupisa, ita chokwadi chekuita kwechiedza, kuderera kwechiedza.
2.Tora UL Yakanyorwa Nguva Dzose mutyairi mutyairi dhayeti ne dimming basa, ita kuti mwenje ishande pane yakakwana optimum panguva iyi chengetedza yako yemagetsi mutero.
3.Kushandisa Kwakanyanya kushanda SMD3030 / 2835 LED ine yunifomu PPFD panguva iyi chengetedza kuita kwakadzikama kuita uye hupenyu hwehupenyu uine yakaderera kugadzirisa.
4. Senge zuva rizere masekondi, rinopa huwandu hwakazara hwehurefu (400-700nm) uye kusimba kwezvirimwa kubva mukudyara, veg, kutumbuka nekukohwa zvakanyanya kunaka kukura kwemadomasi, cannabis.
(100% yekuyedza data)
8.0 makirogiramu (17.6lbs)
Kurongedza Saizi(1pc / ctn)
Mharidzo 1 pc, 1-3 mazuva ekushanda
2-20 pcs: 3-7 mazuva ekushanda
21-100 pcs: mazuva gumi ekushanda
> 100pcs, inosimbiswa
Pashure: SPF -5P / 6P / 8P Plus Led inokura Chiedza
Zvadaro: Model PGW-200/600 PANEL LED KUKURA CHIEDZA
Model PGW-100/400 PANEL LED KUKURA CHIEDZA